Global Voices teny Malagasy » Tsy demaokrasia raha maniry “filoham-pirenena mandrakizay” ireo mpifidy ao Roandà? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Novambra 2019 15:26 GMT 1	 · Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika Miranah
Sokajy: Afrika Mainty, Rwanda, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
98% n'ny Roandey no nifidy tamin'ny 18 Desambra 2015 mba hanova ny lalàmpanorenan'izy ireo hahafahan'ny filoha Paul Kagama hilatsaka hofidiana fanintelony amin'ny taona 2017. Raha ara-teknika, dia hahafahan'i Kagame mijanona eo amin'ny fahefana hatramin'ny taona 2034  izany. Hahafahany mirotsaka fanim-pitony fanampiny ary avy eo fe-potoam-piasana roa-dimy taona ilay lalàmpanorenana.
Notsikeran'ny mpanohitra  sy ireo mpikatroka ny zon'olombelona  ary koa ireo mpiara miombon'antoka ho an'ny fampandrosoana iraisam-pirenena tahaka ny Etazonia sy ny vondrona Eoropeana  ny fitsapan-kevi-bahoaka.
Misy ny adihevitra mitohy ao amin'ny firenena Afrikanina marobe mikasika ity fe-potoam-piasana fahatelo ity, izay nitarika fitroarana sy fahafatesana sivily tao amin'ny firenena tahaka an'i Borondi , Repoblika Demaokratikan'i Kongo sy Burkina Faso ity. Nitsipaka ny hevitra famerana ny fe-potoam-piasana indroa miatoana ho an'ny filoham-pirenena manerana ny faritra ny fivorian'ny Vondrona Toekaren'ny Fanjakana Afrikanina Andrefana (ECOWAS na CEDEAO) tamin'ny volana Mey 2015 tany Accra, Ghana, rehefa nanohitra izany fanapahan-kevitra izany  i Gambia sy Togo, ireo firenana hany tsy manana fetra amin'ny fe-potoam-piasana.
Mampiseho ny fikarohana  mifototra amin'ny fanadihadiana tany amin'ireo firenena Afrikanina 34 notontosain'ny Afrobarometer, tetikasa iray mandrefy ny fiheveran'ny besinimaro any Afrika atsimon'i Sahara fa manohana famerana fe-potoam-piasana indroa ny ankamaroan'ny Afrikana. 18 ireo firenena Afrikanina  tsy manana fetra amin'ny fe-potoam-piasan'ny filoham-pirenena.
Nilaza ireo mpanao lalàna Roandey  tamin'ny volana Aogositra 2015 fa nampiseho ny fifampidinihana manerana ny firenena fa Roandey 10 monja no manohitra ny hevitra fe-potoam-piasana fahatelo.
Manoloana ny fanamelohana avy any Andrefana, dia nilaza  i Thierry Gatere, Roandey mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona fa “nanao hosoka” ny fanambaran'izy ireo momba ny fitsapan-kevi-bahoaka ny governemanta tandrefana. Miresaka momba ny tsikera fa tsy nomena fotoana ampy hiadiana hevitra ireo mpifidy, nanoratra  izy hoe:
1/1 Rahoviana i #Etazonia  no hitsahatra tsy hitsabaka amin'ny raharahan'ny firenena hafa intsony? Tamin'ny taona 1994, nitondra fiaramanidina i Etazonia mba hanala ny#Amerikana .
Nitranga tamin'ny taona 1994 ny fandripahana Roandey .
@USAmbRwanda  Fahamendrehanay ny Safidinay. Hajao izany farafaharatsiny. #RwandansDecide  #RwandaReferendum 
Mandidy ny filohan'i #Rwanda  mba hiala ny @TheNYTimesUM . Izany tokoa ve? Taonan'ny avonavona sy ny tsy fahalalana izao?
Arahabaina #RwandansDecide  #RwandaReferendum  #Rwanda  saingy maniry aho mba handray lesona avy amin'i @NelsonMandela  ireo mpitarika Afrikanina @dailynation  @kot 
Na ahoana na ahoana, mitovy ny dikan'ny Eny sy Tsia ao #Rwanda . TSIA = TSIA iray saingy mandresy Kagame = 99%.
#RwandaReferendum  no “vahaolana Afrika” miavaka ho an'ny “olana Afrikana” ka ny vahaolana ihany no olana
Tsy mahagaga ahy raha ny 98%n'ny Roandey no nifidy hamela an'i #Kagame  hirotsaka hofidiana indray. Nandositra, any am-ponja na maty ny maro tamin'ireo mpitsikera azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/29/145039/
 98% n'ny Roandey no nifidy : http://www.bbc.com/news/world-africa-35138671
 mijanona eo amin'ny fahefana hatramin'ny taona 2034: http://www.theguardian.com/world/2015/dec/19/rwandan-president-paul-kagame-could-rule-until-2034-after-voters-lift-limits
 mpikatroka ny zon'olombelona: http://www.english.rfi.fr/africa/20151221-rwanda-just-another-president-clinging-power
 Etazonia sy ny vondrona Eoropeana: http://news.yahoo.com/rwandan-bid-kagame-third-term-undermines-democracy-eu-112323357.html
 Nitsipaka ny hevitra : https://globalvoicesonline.org/2015/05/25/region-wide-presidential-term-limits-for-west-africa-not-so-fast/
 18 ireo firenena Afrikanina: http://t.co/EBSqlNZ4n0
 Nilaza ireo mpanao lalàna Roandey: http://www.ngrguardiannews.com/2015/08/only-10-rwandans-oppose-kagame-third-term/
 fandripahana Roandey: https://en.wikipedia.org/wiki/Rwandan_Genocide